Mkpụrụ vine "Kishmish Jupiter": foto, nkọwa nke ụdị dị iche iche, nchedo site na pests na ọrịa - Ugbo - 2020
Ụdị dịgasị iche iche na uto dị mma - Kishmish Jupiter mkpụrụ vaịn
Ndị kachasị ewu ewu bụ mkpụrụ vaịn dị iche iche, nke ọ bụghị nanị na o nwere uto dị ụtọ, ma ha kwesịkwara ịṅụ mmanya na ịchacha mkpụrụ vaịn.
Ọ dị mkpa na ụdị dịgasị iche iche dị mfe na-eto ma na-eguzogide ọgwụ na ọnọdụ ihu igwe nke etiti ma ọ bụ ọbụna edere edere.
Kiet ke otu emi edi utịp utịp usem American "Kishmish Jupiter".
Grape Kishmish Jupiter: nkọwa nke iche iche
Mkpụrụ Jupiter bụ ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara, nke na-eme ka ọ bụrụ na o tozuru okè.
Ụdị nke oval, ọnụ ọgụgụ dị arọ bụ ihe dị ka gram 5. Anụ ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ nke nwere akpụ dị arọ, iji detụ ya, dabere na afọ ahụ, ọ nwere ike ịmị mkpụrụ na-esi ísì ụtọ.
Berry adịghị adị mfe ịnwụ ma nwee ezigbo shuga - ruo 22%. Mkpụrụ anaghị adị. A na-ahapụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị na mkpụrụ osisi.
Otu n'ime sultanas dịkwa mkpa ịcheta Kishmish Century, Attica, Black Finger na Kishmish 342.
Ụyọkọ nke ụdị a dị ntakịrị, moderately friable (tomato anaghị adịkwa nke ọma), nke conical shape ruo na gram 500, mgbe mgbe na nku.
Bush srednerosly, mgbe grafting - ike, ọma-ripened. Okooko bu bisexual, ya mere enweghi ike ichoputa ozo di iche iche.
Achọghị mmetọ ọzọ na Miner, Galahad na Augustine.
Osisi vaịn na-etolite nke nta nke nta n'ogologo Ome.
Foto mkpụrụ vaịn "Kishmish Jupiter":
E nwetara ụdị dịgasị iche iche na America na Mahadum Arkansas na 1998 site n'ịgafe iche iche dị iche iche 1762 ma 1258.
N'etiti ndị America dị iche iche, a makwaara Alfa, Mmasị Aka na Kadinal.
Kishmish Jupiter - ụdị mkpụrụ osisi vaịn na-enweghị atụ na enweghị mkpụrụ ndụ 1 klas, nke a na-eji ọhụrụ eme ihe ma jiri ya maka ihicha akwa mịrị.
Maka nkwadebe nke mịrị na-adabara Karmakod, Chọọchị Russian na Kishmish Century.
A na-eme ka Yunmish Jupiter pụta ìhè site n'oge na-eto eto, n'oge ya bụ vegetative Ụbọchị 105-115. Ugbua site na August 10, ị nwere ike ịchọta tomato maka nchịkọta.
Mkpụrụ osisi ahụ gbanyesiri mkpọrọgwụ ike ma malite ịmị mkpụrụ na afọ nke abụọ maọbụ nke atọ mgbe ọ kụrụ na-adịgide adịgide. Na oge ịse ahụ nwere ike ịmepụta ruo 4 inflorescencesebe ohia apughi idozi ya - osisi vine nwere ike iguzogide ibu a.
Iji nweta owuwe ihe ubi tupu mgbe ahụ, ọ ka dị mma iji wepu ihe ndị ahụ, na-ahapụ naanị mmadụ 2. Osisi vaịn na-emepụta 6-8 anyaka ibu ibu - 30-35.
Nrụpụta nke Jupiter dị elu na mgbe niile.
Enwere ihe dị ka narị abụọ na narị abụọ nke tomato na 1 hectare; na nlekọta kwesịrị ekwesị, ruo 260 centent.
A na-ebu osisi tomato, ma, mgbe ha na-ekwusi okwu ha ike, ọ bụrụ na ọ na-adị mfe ịnwụ ngwa ngwa.
Ụdị dịgasị iche dị ka Count nke Monte Cristo, Muscat Dievsky na Lia dị mfe ịnwe njem.
Ụdị njirimara nke dịgasị iche iche bụ nkwụsị nke ntu oyi. Kishmish Jupiter kwadoro -27⁰С, ya mere, ọtụtụ ndị na-eto eto na-eto ya n'enweghị ebe obibi maka oyi. Ọ bụrụ na ndị Ome na-akpọnwụ, ohia nwere ike ịmaliteghachi na oge.
Mma nke North, Super Extra na Arched bụkwa karịsịa ntu oyi na-eguzogide ọgwụ.
Mkpa: A ga-enweta owuwe ihe ubi mbụ ma buru ibu site na nhazi mkpụrụ vaịn GK.
Ndị dịgasị iche iche na-anabata nke ọma kpụ ọkụ n'ọnụ atọ ruo mgbe owuwe ihe ubi na prikormku organic nri.
Ihe dịgasị iche iche adịghị emerụ site na beps ma jiri ezigbo nguzogide ọrịa ndị dị ka oidium na mildew (na ọkwa nke 2.5 ihe). N'agbanyeghị na-eto eto na ọtụtụ atọ, tomato anaghị emetụta isi awọ.
O zuru ezu iji mepụta ọgwụ mgbochi na ọgwụ ndị na-ahụ maka ọrịa ndị ọrịa. 1-2 ugboro maka oge dum. Ego ndị a agaghị emetụta uto nke tomato n'ụzọ ọ bụla ma bụrụ ezigbo nchekwa maka ụmụ mmadụ.
Banyere anthracnose, chlorosis, bacteriosis na rubella, ị nwere ike ịgụ gbasara ọrịa ndị a na-ahụkarị nke mkpụrụ vaịn n'ụzọ zuru ezu na saịtị anyị.
Ụdị ihe dị iche iche na-ezutekarị nsogbu nke òké - n'oge oyi ndị a na-emebi osisi nke osisi ahụ. N'okpuru ọnọdụ nke etiti dị n'etiti, enweghi ike kpuchie ụdị dịgasị iche iche; mgbe ha toro na mpaghara ugwu, na-ekpuchi osisi ahụ na alaka osisi pine ga-enyere aka na nsogbu nke òké.
Na ọgụ megide ubiquitous aphids, pincers ma akwukwo nyocha mgbe nile nke osisi na iwepu akụkụ ndị emetụtara, ịtọ ala na igbo ahịhịa, nke ha na-apụta na mbụ, ga-enyere aka.
Mgbe a chọtara pests ndị dị otú ahụ, a ghaghị mesoo osisi vaịn ahụ na acaricides na ọgwụ ndị na-emepụta ihe na-edozi ahụ.
Jupiter bụ ụdị dịgasị iche iche na-abụghị maka homegrown viticulture, kamakwa maka ịmalite na nnukwu ebe. Iguzogide ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe agbanwe na nkwụsị elu ntu oyi na-eme ka o kwe omume iji nweta uto dị elu ma dị elu nke ngosi ahụ na uto dị mma.
Ọ dịghị ụdị dị ụtọ dịka Velika, Krasa Balki na Victoria.